Samsung dia namoaka fanavaozana ny fiarovana tamin'ny May ho an'ny Galaxy Note 8 | Androidsis
Tamin'ny volana aprily lasa teo, ny orinasa aziatika Samsung dia nandefa ilay nandrasana hatry ny ela Fanavaozana ny Galaxy Note 8 amin'ny Android Oreo, fanavaozana izay efa elaela izay ary tokony hanomboka hijery an'io i Samsung raha toa ka tsy mila manomboka reraka ity mpampiasa ity noho ny faharetany izay efa nahazatra antsika.
Raha ny teôria dia namaha io olana io ny Project Treble, saingy Samsung dia mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fananganana ity tetikasa ity, zavatra izay azo antoka fa tsy tsara ho an'ny orinasa na ny mpanjifa. Farafaharatsiny, raha mitandrina ny fanoloran-tenanao ianao amin'ny patch patch isam-bolana, na dia tonga tara mihoatra ny mahazatra aza izy ireo indraindray.
Samsung dia natomboka manerantany, ny patch fiarovana mandritra ny volana Mey ho an'ny Galaxy Note 8, herinandro taorian'ny famoahana azy tany Etazonia fotsiny. Ny fanavaozana, izay azo alaina ao amin'ny OTA, dia mihoatra ny 700 MB fotsiny. Saingy tsy mila mihazakazaka misintona azy ianao, raha tsy hoe manana olana ara-piarovana ianao, satria ity fanavaozana ity, na eo aza ny lanjany, dia tsy manome zava-baovao ho antsika, na hatsarana na fiasa ary mifantoka fotsiny amin'ny famahana ny lesoka fiarovana hita tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, amin'ny sosona fanaingoana Android sy Samsung.
Manamboatra ity fanavaozana ity Fahalemena 6 lehibe hita amin'ny Android, miaraka amin'ny 7 hafa izay tsy misy afa-tsy ny terminal Samsung. Ho fanampin'izay, bibikely 3 mety hitera-doza koa dia namboarina sy voamarika, izay namboarina ihany koa taorian'ny fametrahana ity fanavaozana ity.
Raha mankafy ny Samsung Galaxy Note 8 mahafinaritra ianao dia azonao atao ny manamarina raha efa misy io fanavaozana io amin'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny Settings> Fanavaozana ny lozisialy ary kitiho ny bokin'ny fampidinana Download. Raha efa misy io dia hiseho amin'ity fizarana ity ary afaka manomboka isika ampidino amin'ny fametrahana manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana an'i May ho an'ny Galaxy Note 8